Sagantaa Kibxata Sadaasa 16, 2021 - Independent Oromia
Haleellaan humna xiyyaaraa fi meeshaalee waraanaa gurguddaan, Uummata Oromoo Walloo hidhanno-maleessa irratti fuuleffachuun, Loltoota MKIIn raawwatamu jabaatee itti-fufuu.
Halkan edaa (Sadaasa 15, 2021), haleellaa xiyyaaraan Magaalaa Sambatee irratti raawwatamaa buleen lubbuu, qaamaa fi qabeenya hawaasa Oromoo Walloo irra gaaga’amnii fi mancaafamni cimaan dhaqqabuu.
Kibxata har'aas, Magaalaan Sanbatee meeshaalee waraanaa gurguddaa halaalaa dhukaafamanii fi boombii xiyyaara irraa gadi itti-roobsamuun shororkaawaa ooluu.
Sakattaa fi hidhaan akkaan hammaachuu
Tikoonni Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan Magaalaa Finfinnee fi naannawa san keessa bobbaafaman sakattaa jabaa geggeessaa jiraachuu.
Sakattaa fi basaasa daafii sodaa WBO’tiin hawaasa Oromoo Magaalaa Finfinnee keessa jiraatu irratti raawwaatamaa jiru kanaan, Oromoonni danuun yakka tokko malee hidhamaa jiraachuu.
Qaamonni basaasaa MKII sabboontota ykn qabsaa'ota of-fakkeessuun Oromoota hidhaman kannneen waliin hidhamaa jiraachuun isaanii, dhimmicha daran hammeessuu waan maluuf, of-eeggannoo jabaa taasisuun akkaan barbaachisaa ta'uu dhaaammata, Oromtichi Magaalaa Finfinnee irraa bilbilaan odeeffanne.
Sagantaa Kibxata Sadaasa 16, 2021